भारतमा कोरोनाको संक्रमण फैलन रोकिएपछि मात्र हामी ढुक्क हुनसक्छौं : रामचन्द्र पौडेल [अन्तर्वार्ता] | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
भारतमा कोरोनाको संक्रमण फैलन रोकिएपछि मात्र हामी ढुक्क हुनसक्छौं : रामचन्द्र पौडेल [अन्तर्वार्ता]
access_time२०७६ साल चैत्र १६ गते, आईतवार १०:१३ AM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति अन्तर्वार्ता
काठमाडाैं । कोरोना भइरस (कोभिड-१९) ले अहिले विश्वभर महामारीको रुप लिएको छ । त्यही महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले पनि देशभर लकडाउन गरेको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप, सरकाले गरेको लकडाउन र नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर विदुर कटुवालले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग गरेका कुराकानी ः
लकडाउनको बेला के गर्दै हुनुहुन्छ ?
- घरकै कम्पाउण्ड भित्र बस्ने । पढ्ने, करेसाबारीतिर खनीखोस्री गर्ने गर्दैछु । फूलका बोटविरुवाको हेरचाह गर्दैछु ।
भनेपछि लडकडाउनको बेला आफूलाई सुरक्षित राख्दै सरकारलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
- सरकारलाई मैले पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको छु । अरुलाई पनि सहयोग गर्न भनिरहेको छु । यो बेलामा सरकारलाईभन्दा पनि आफैँलाई सहयोग हो । आफैँलाई सहयोग गर्न भनिरहेको छु । आफूलाई सुरक्षति बनाउन भनिरहेको छु ।
सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध लकडाउन गरेको छ, सरकारको यो कदम कति पर्याप्त छ ?
- कोरोनाविरुद्ध सरकारले उठाएको कदम लकडाउन राम्रो छ । मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु । स्वास्थ्य र सुरक्षाका क्षेत्रलाई पहिला सुरक्षित बनाउनु पर्यो । डाक्टर तथा नर्सका लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण पिपिईको व्यवस्था हुनु पर्यो । मैले धेरै अगाडिदेखि पिपिईको कुरा उठाउँदै आएको छु । अहिले पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन । अस्पतालको प्रबन्ध पनि अझै राम्रो भइसकेको छैन ।
लकडाउन सरकारले आदेश दिने हो । जनताले मानेका छन् । जति तयारी गर्नु पर्ने हो । त्यति तयारी पुगेको छैन । कोरोना भाइरसविरुद्ध जति तयारी हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । गर्दै जानु पर्छ ।
प्रतिपक्षको नजरमा कोरोनाविरुद्ध सरकारको तयारी पर्याप्त छैन ?
- यो पर्याप्त हुने कुरा पनि होइन । तर, जति हुनु पर्दथ्यो, त्यति हुन सकेको छैन ।
लकडाउनको समयअवधि अझै लम्ब्याउनुपर्छ की एकै हप्ताले पुग्छ ?
- लकडाउनको अवस्था अझै दुईतीन दिन हेरौं । केही बढाउन पनि आवश्यक पर्छ । जस्तो भारतमा बढेको कारण । भारतमा संक्रमणको क्रम कसरी रोकिन्छ । अहिले फैलिने क्रमम जारी छ । त्यहाँ (भारत) पूर्ण रुपमा रोकिएपछि मात्र हामी सुनिश्चत हुन सक्छौं, ढुक्क हुन सक्छौं । त्यसो भएकाले हामी अझै अनुशासनमा बस्न सक्छौं जस्तो लाग्छ ।
भारतको अवस्था हेरेर नेपाल सरकारले निर्णय लिनु पर्ने कांग्रेसको बुझाइ हो ?
- खुला सीमाना छ । जसले गर्दा समस्या आउन सक्छ । अहिलेसम्म बाहिरबाट आएकाहरु मात्र कोरोनाका बिरामी भेटिएका छन् । नेपालभित्र उत्पन्न भएको देखिएको छैन । बाहिरबाट (विदेश) आउनेहरुबाट संक्रमण फैलिने खतरा विद्यमान छ । बाहिरबाट आउनेहरु तीन/चारजनामा संक्रमण देखिएको छ । त्यसो भएकाले अझै सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।
केही दिन अघिमात्र तपाईंले कोरोनाविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माग गर्नु भएको थियो । किन त्यस्तो माग गर्नुभयो ?
- मैले सबैलाई साथमा लिएर जानु पर्छ भन्ने सेन्स (अर्थमा) मा एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्छ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाँउमा भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने शिलशामा भनेको हुँ । विश्वमा त्यस्ता पनि अभ्यास भएका छन् भन्न खोजेको हुँ । मैले सरकारमा नै हामी चाहियो पनि भनेको होइन ।
मैले सबै शक्ति मिलेर राष्ट्रिय विपत्तिको समना गरौं भनेको हुँ । यो संकटबाट बचौं, संक्रमणबाट बचौं, कोरोना आक्रमणलाई परास्त गरौं भनेको हुँ । सरकारमा सहभागित चाहियो भनेको होइन ।
भनेपछि राष्ट्रिय विपत्ति आइलागेको बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्नु भएको !
- त्यो उदेश्यले बोलेको पनि छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पार्टीका केही नेताहरु रिसाएको पनि पाए । रिसाउन जरुरी पनि छैन । सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पनि समेटेर काम गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको हुँ । सरकारमा सहभागिताको महशुस गरेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको काम कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
- गाँउघरबाट १४ औं महाधिवेशनको काम सुरु भएको थियो । अहिले त्यो काम लकडाउनले रोकिएको छ । पछि स्थिति सहज बन्दै गएपछि काम सुरु हुन्छ । १४ औं महाधिवेशनको काम कोरोना त्रास हट्ने बित्तिकै सुरु हुन्छ ।
१४ औं महाधिवेशनमा तपाईंहरुका तर्फबाट सभापतिको उम्मेदवार को हो ?
- अहिले सभापतिको उम्मेदवार कोही पनि तय भएको छैन । तय हुने बेला पनि भएको छैन ।
कांग्रेसका शिर्ष नेताहरु म पनि उम्मेदवार भनेर हिडिरहेका छन् नि !
- पार्टीमा काम गरिरहेका मान्छेहरु, सम्भावना भएका मान्छेहरुमा आकंक्षा हुनु स्वभाविकै हो । त्यसलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन । तर, पनि सबै एकै ठाउँमा आउनु नै पर्छ । एउटा सहमति गर्नै पर्छ । पार्टीलाई दिने नेतृत्व एउटै हो ।
उहाँहरुले प्रचार गरिरहेको देखिनछ नि !
- प्रचार–प्रसार गर्नु भएको होला । सभापति मै हुनुपर्छ भनेर हिड्नु भएको जस्तो लागेको छैन ।
१४ औं महाधिवेशमा सभापतिको उम्मेवार तपाईं हो की होइन ?
- म साथीहरुसँग सल्लहामा छु । मेरो कुरा अलग हो । मेरो आवश्यकता पर्यो भने, त्यतिखेर कुरा हुन्छ ।
साथीहरुले र पार्टीले आवश्यकता ठानेको खण्डमा तपाईको उम्मेदवारी तयारी छ ?
- त्यो हुन सक्छ । राष्ट्रको लागि आवश्यकता परेको खण्डमा बलिदान दिन तयार भएको मान्छे हुँ । लोकतन्त्रको लागि जीवन अर्पण गरिसकेको छु ।
तपाईं र संस्थापन पक्षबीचको विवाद मिलिसक्यो बाँकी छ ?
- व्यक्तिगत कुराहरु मिलेकै छन् । नीतिगत र प्रक्रियागत कुराहरु मिल्न बाँकी छन् । उहाँले (देउवा) र मैले देखेको पार्टीको हितका कुरा फरक हुन सक्छ । पार्टीका हितको फरक असहमति हुन सक्छ ।
कांग्रेसको हितको लागि देउवासमक्ष तपाईंका फरक मत छन् ?
- पार्टीको हितको लागि फरक मत हुन सक्छ ।
कोरोना भाइरसको त्रासको वेला वा लकडाउनको समयमा जनतालाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
- स्वयम अनुशासित भएर, आफैँ नियन्त्रित भएर । हामी आफ्नै आचरणमा निणन्त्रणमा रहौं । स्वास्थ्यमाथि लापरबाही नगरौं । अहिलेको संकटमा हामी आफूले आफैँलाई बचाउने काम गरौं । सबै जनतालाई यही भन्न चाहन्छु । सरकारले पनि निम्न तथा विपन्न वर्गका जनतलाई बचाउने कामको दायित्य पूरा गरोस् । अहिले सेना र प्रहरी पनि सडक छन् । तिनिहरुको सुरक्षाको प्रबन्ध पनि होस् । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा होस् । सुरक्षा गर्नेहरुको सुक्षा होस् ।